Magaalada Fagersta oo horumar ka gaadhay shaqo abuurista Soomaalida | Somaliska
Magaalada Fagersta ee ka tirsan gobolka Västmanland ayaa lagu amaanay in ay horumar ka samaysay sidii ay Soomaalida shaqo ugu abuuri lahayd. Fagersta ayaa soo bandhigtay in 55% Soomaalidii timid afar sano ka hor ay hada shaqo haystaan ama waxbarasho sare u sii gudbeen.
Maamulka Fagersta ayaa sheegay in horumarka ay sameeyeen ay ka dambayso waxbarasho iyo wada shaqayn ay la sameeyeen xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) iyo shirkadaha. Dadka ka qeyb galay mashruuca ayaa qaatay waxbarashooyin kala duwan sida Dhirta iyo darawalnimada baska. Qaar badan oo ka mid ah dadkii waxbarashada dhamaystay ayaa shaqooyin ka helay daafaha Sweden.
Magaalada Fagersta oo anika xitaa aan mudo ku noolaa ayaa la dhihi karaa in ay tahay goob ka duwan magaalooyinka kale ee Sweden. Maamulka degmada ayaa ah kuwo ay ka go’antahay sidii ay dadka soo galootiga ah ee ku nool magaaladooda u caawin lahaayeen isla markaana ku faraxsan in dad cusub ay soo degaan magaalada. Fagersta ayaa ka hor sanadkii 2010 ahayd magaalo ay tirada shacabkeeda hoos u dhacayeen balse markii Soomaalidu soo degtay ay kor u kacday tirada shacabka ku nool magaalada. Arintaas ayaa qaasatan muhiim u ah maamulka degmada.
waxaan ubahdaa in badan bahda soomaliska in aan su,al waydiiyo la xidhiidho shaqooyinkooda,lakiin ilaa hada maan hellin tel aan kala hadlo qof soomali ah ma la igu caawinkaraa,shukran..
jicaale aad baad u fiican tihiin halka ka sii wada anigu magaaladsa aan daganahay soomaali baa ugu badan soomalidana ugu liidata carabta naga fiican ilaahaty gaalada ha idiin sahlo adna ku dadaal soomalida meesha dagan iyo kuwa iman doonaaba inaad caawiso aad baan ugu farxay muuqaalkan markaan daawaday TUSAN TACK
Inkasto aan ahayn reer sweden oo Reer Uk ka tirsnhy ,shekadan fb ayaa kaso raacay lol hada videga ma daawan karo goob shaqo awgeed… somalida sweden ma shaqo la,aan aya haysa mase ceerta u macaatay koley back 2006 mar booqday stocholm/ ringby iyo maglda borlange ,somali badan oo wadooyinka tuban kuso arkay , maalinta ceerta so dhacdayna wala daremya sida ciida dabcan wa huba ad badan o shaqeys in buuxan , ,,ugu dameyn wll done Västmanland dadaalkuna wa muhim ..
yanan ka tagin sxb maqaal so qoray also well done ,waraka hormarka umad ka hadlay wa muhiim
April 13, 2014 at 00:51
aniga waxan raba shaqo oo ah polis aniga shaqadas aad aayaan oo xiseyaa oo na jeclahay marka qofki shaqadas helo aniga haa ii sowaco lam bar keygana waa 0727714577 baye